Iindaba - GIFA 2019 EJAMANI
Ukudubula kwentsimbi engenanto
Sika i-Wire Shot
Ingxubevange yeMilicon Manganese
IGIFA 2019 EJAMANI
Umboniso we-14 weSiseko soRhwebo lwaMazwe ngaMazwe kunye neQonga lezobuGcisa ebelibanjwe ngoJuni, 2019 eDuesseldorf, eJamani. Njengomnye wababonisi, uFeng erda wazi amaqabane oshishino ngakumbi.
I-GIFA-2019, iQulunqwe yiNkampani yeMiboniso iMesse Dusseldorlf yaseJamani, umboniso wasekwa ngo-2003 kwaye ubanjwa rhoqo kwiminyaka emine. Okwangoku ngowona mboniso mkhulu wokuphosa umhlaba kunye nokulahla ngexesha elinye, iJamani kwiziko leziko lezorhwebo kunye nomboniso wonyango lobushushu, i-Exhibition ye-Metallurgical technology eJamani. Ngo-2015, indawo yomboniso idlule kwi-86,000 yeemitha zesikwere, kwaye bekukho i-2,214 Iinkampani ezine ezaziwayo kwihlabathi - iMAGMA, ABP, ABB, i-OMEGA kunye ne-DISA-zibonisa iimveliso eziphambili kunye neetekhnoloji zehlabathi ngaphezulu kwe-78,000 yeendwendwe ezivela ngaphezulu kwe-120. amazwe atyelele umboniso, kwaye isibini kwisithathu sabatyeleli sivela kubavelisi, abaphuhlisi, abasebenzisi kunye nabenzi bezigqibo zokuthenga iinkampani kwiinkampani zabo. Ngo-2019, umboniso uza kubonisa izixhobo eziphambili zokuphosa izixhobo, isixhobo kunye nemitha kunye nomgangatho ogqwesileyo bephosa izinto, bephosa izinto China, bephosa iimveliso iinkampani ezinxulumene nokuqonda ngamazwe utshintsho kwimarike, bonisa ukulahlwa kunye neemveliso ezinxulumene nazo, ukwandisa urhwebo lwamanye amazwe, ukuphucula ukukhutshwa kwamanye amazwe kunye nokuphosa izinto ezilungileyo.
Ukusuka ngomhla wama-25 ukuya kowama-29 kweyeSilimela ngowama-2019 “kwihlabathi eliqaqambileyo lezinyithi” elibonisa uluhlu olwahlukileyo lweenkongolo zamanye amazwe, iisimpoziyam, iiforamu kunye nemiboniso ekhethekileyo. Imiboniso emine yorhwebo i-GIFA, NEWCAST, METEC kunye neTHERMPROCESS zibonelele ngenkqubo ekumgangatho ophezulu egxile kuyo yonke itekhnoloji yesiseko, ukuphosa, isinyithi kunye netekhnoloji yenkqubo ye-thermo-kubandakanya ukwenziwa kwemveliso eyongezelelweyo, imiba yentsimbi, imikhwa kwishishini lesinyithi, imiba yangoku Inkqubo yetekhnoloji ye-thermo okanye izinto ezintsha kumandla nokusebenza kwezixhobo.
UFeng erda wathumela amaqela amathandathu e-elite okuthengisa ukuba athethathethane nokusebenzisana neenkampani eziphezulu kumzi mveliso wentsimbi kwindawo leyo, kwaye afezekisile iziphumo ezilungileyo.Sijonge phambili kumboniso olandelayo.
GIFA, Ndiza kubona ngo-2023!
IDILESITengzhou City, kwiPhondo Shandong, China
IXESHA LOKUSEBENZANgo-8: 00 kusasa-18: 00 emva kwemini ngoMvulo ukuya ngoMgqibelo